सन्तोष पन्तविरूद्ध यौन दुर्व्यवहारको उजुरी
सन्तोष पन्तविरूद्ध यौन दुर्व्यवहारको उजुरी	By नवीन सन्देश on	२ आश्विन २०७३, आईतवार ०९:१६
काठमाडौँ । बिपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानकी एक महिला सुरक्षा गार्डले कलाकार सन्तोष पन्तलाई आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी छन्। शुक्रबार मध्यरातमा केटिएम सेक्युरिटिका अध्यक्ष रामेश्वर साहसँग आएका पन्तले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उनले शनिबार इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा लिखित उजुरी दिएकी छन्।
केटिएम सेक्युरिटीका ब्राण्ड एम्बेस्डरसमेत रहेका पन्तले आफ्नो संवेदनशिल अंगमा छुने काम गर्नुका साथै व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धीत प्रश्न पनि सोधेरथप पीडा दिएको उजुरीमा उल्लेख रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएसपी ढकेन्द्र खतिवडाले बताए।
स्रोतका अनुसार केटिएमका अध्यक्ष साह, निरीक्षक विष्णु कोइराला, हेडगार्ड राजेन्द्र तामाङ पनि महिला होस्टेलमा पुगेका थिए। महिला होस्टेलमा राति ११ बजेपछि कसैलाई प्रवेश नदिइने भए पनि प्रमुख स्वयम् आएकोमा ढोका खोलिएको उनको भनाइ छ।
उनले अध्यक्ष साहले पनि श्रीमान भए/नभएको, छोराछोरी भए/नभएको, काम गरेपछि र अगाडिको शारीरिक तौल र नाप के कति घटबढ भएको लगायत प्रश्न गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। महिला अधिकारकर्मी मञ्जु भण्डारीले महिला कामदारमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिन्।नयाँ पत्रिका
तपाइँकॊ प्रतिक्रिया : Related Posts २२ मंसिर २०७३, बुधबार १०:५१ 0	क्रिस गार्डनरः घरबारविहीन मानिस, जो करोडपति बने
२१ मंसिर २०७३, मंगलवार ११:२३ 0	नेपालीलाई समस्यामा पार्ने साउदीका कम्पनीलाई ‘ब्ल्याकलिष्ट’मा राखिँदै
१७ मंसिर २०७३, शुक्रबार ११:४४ 0	नेताको आवाज बनाउँदै फोनबाट एक प्रहरीको ठगी, बैंकका सिइओदेखि गुण्डा नाइकेसम्म ठगिए
२२ मंसिर २०७३, बुधबार १४:१६ 0
लैनचौरको निर्देशनमा आएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन रोकिँदैनः चन्द्र भण्डारी
२२ मंसिर २०७३, बुधबार १३:२७ 0
रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले २९ प्रतिशत बोनस दिने
२२ मंसिर २०७३, बुधबार १३:०१ 0
इन्डोनेशियाको शक्तिशाली भूकम्पमा परि २४ जनाको मृत्यु
२२ मंसिर २०७३, बुधबार १२:०८ 0
लौ न प्रभु यतापनि ‘कुलमान’ जन्माई देऊ ! – अमृता लम्साल
२२ मंसिर २०७३, बुधबार ११:३३ 0
पत्नीले सम्बन्धविच्छेद चाहेमा अंश नपाउने ?
२२ मंसिर २०७३, बुधबार ११:१० 0
मेरो बिहे पनि भएको छैन, दुब्लाएकी पनि छैन ’दीपाश्री
२१ मंसिर २०७३, मंगलवार ११:४५ 0
हेलिकप्टर चार्टर गरेरै उडे सौगात र दीया
२० मंसिर २०७३, सोमबार १०:२३ 0
भूवन केसीले साम्राज्ञीलार्इ ‘अंकल’ नभन्नु भनेपछि भन्न थालिन् ‘भूवन जी’
१९ मंसिर २०७३, आईतवार १२:५३ 0
३० लाख दिएपनि अनमोलले फिल्म खेल्दैन- भुवन केसी
१७ मंसिर २०७३, शुक्रबार १७:५५ 0
‘जात्रा’ बाबुराम भट्टराईले दिए उत्कृष्टको उपमा
१७ मंसिर २०७३, शुक्रबार १२:४१ 0
संगीतका एक पुजारी गंगाराम र उनको सांगीतीक यात्रा
तस्वीर	माेडल तथा नायिका पुनम पाण्डे नायिका तथा माेडल पुनम पाण्डे विभिन्न काण्डका कारण चर्चामा छिन् ...
December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 July 2013 June 2013 April 2013 March 2013 July 2012 हाम्रॊ बारेमा	भर्सटाइल मिडिया टेक्नॊलॊजी एण्ड मल्टी सप्लायर्स बाट संचालित नवीन सन्देश पोर्टल कुनैपनि जातजाति, धर्म, समूदाय, वर्ण, लिङ्गलाई ठेस नपुर्याई स्वतन्त्रतापूर्वक नौला र सिर्जनात्मक विषयबस्तुहरु पस्कने गर्दछ। यहाँ प्रस्तुत हुने हरेक प्रकारका विषयबस्तुहरु आधिकारिक हुने वचनवद्धता पनि हामी प्रकट गर्न चाहन्छौं। पत्रकारिताको मूल मर्मलाई हरपल पछ्याउँदै सामग्रीहरु प्रस्तुत गर्नेछौं। यो सबैको साझा पोर्टल भएकाले सामग्रीहरु पठाएर सहयोग गरिदिनुहोला। तपाईका सिर्जनालाई हामी उचित स्थान दिनेछौं। अन्त्यमा सम्पूर्ण पाठकवर्ग, विज्ञापनदाता, लेखक, शुभेच्छुक आदि सबैको अमूल्य सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछौं।